Wasaaradaha internetka - Falanqaynta Pulpit
Horudhac Pulpit waa diin diineed oo loogu talagalay wacdiyeyaasha. Waa bilaash oo waxaa lagu heli karaa adigoo u diraya codsi: Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view..
Mark wuxuu u adeegay Wasaaradda Pulpit ee Kaniisadda Austinville ee Masiixa tan iyo 1994. Wuxuu haystaa shahaadada Jaamacadda Freed-Hardeman, Jaamacadda Lipscomb iyo Seminary Dib-u-habeeyn. Inkastoo FHU, uu ahaa qofka qaatay deeqda Guy N. Woods ee wacdinta. Waxa uu dhigey heer jaamacadeed oo heerarka kuleejka ah oo ku yaal Daararka Kitaabka Quduuska ah ee Bear Valley Bible, International Christian College, iyo Jaamacadda Faulkner. Waxa uu ka shaqeynayay hawlaha ka socda jasiiradaha Caribbean iyo Bariga Yurub. Wuxuu wax baraa barasho iyo wacdinta waddanka Ukraine sanad walba. Waxa uu ku wacdiyaa afar illaa lix jeer kulamada injiilka sannadkii wuxuuna ka hadlaa casharrada walaalaha iyo siminaarada. Isaga ayaa ah agaasimaha Isbuucaan ee Morgan County ee Maywood Christian Camp ee Hamilton, AL oo ka shaqeeya guddiga talobixinta. Wuxuu si dhow ula shaqeynayaa barnaamijyada hoggaamiyeyaasha hoggaamiyeyaasha.
Waxa uu daabacaa waqti diineed oo loogu talagalay wacdiyayaashii loo yaqaan 'Pulpit Preview'. Waa bilaash oo waxaa lagu heli karaa adigoo u diraya codsi: Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view..
Toddoba cabbir ee jacaylka!
Ilaahay wuxuu leeyahay ammaanta - wax weyn buu sameeyey!
Maxay tahay inaan ka cabsano Ilaah!
Sidee loo dhisaa Kaniisad Xoogan oo Deggan!